KUPHAKATHI 3 IGUMBI YEBHEDE YE-3 (NETFLIX)- UZIJONGELE
Indlu yangoku efikelelekayo ene-airconditioning ngokupheleleyo enamagumbi amathathu okulala. I-NBN kunye neNetflix zinikezelwe. Ngoko umbindi wendlu kukuhambahamba okufutshane ukuya kwindawo yemiboniso bhanyabhanya eyi-2km ukusuka kwisibhedlele iMater 5 mins drive ukuya kwiivenkile ezinkulu, 10 min drive ukuya estrand, eyunivesithi nasesibhedlele. Kukho indawo yokonwabisa ene-webber Q bbq kunye nezihlalo ze-6. Amagumbi okulala aquka ii-queen ezi-2 kunye nebhedi ephindwe kabini kwaye onke amagumbi akhiwe ngaphakathi. Ikhitshi esebenza kakhulu ene-dishwasher ibonelele ngayo yonke into onokuyidinga ukuze uhlale kamnandi.
Indawo esembindini kufutshane neevenkile kunye nethiyetha yemovie kumgama wokuhamba. Indlu yangoku efikelelekayo ene-airconditioning ngokupheleleyo enamagumbi amathathu okulala. Indlu ibekwe kufutshane nesibhedlele i-Mater imizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile zase-castletown, imiz emi-2 ukuya kwi-cineplex yewarrina kunye neevenkile zalapha ekhaya kwaye ngaphezulu kwe-10 mins uqhubela kwi-strand. Kukho indawo yokonwabisa ene-webber Q bbq yonke into onokuyidinga ukuze uhlale kamnandi. Amagumbi okulala aquka ii-queen ezi-2 kunye nebhedi ephindwe kabini kwaye onke amagumbi aneendawo zokungena. Kukho igumbi lokuhlambela elineendlela ezi-2. Umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba uyanikezelwa. Kukho igaraji yokutshixa kabini ekhoyo yokupaka iimoto ezi-2 ukuba ziyafuneka. Ndinomcoci ochwepheshile ococa ipropathi emva kondwendwe ngalunye kwaye ilinen icocwe nguLondolozo lwempahla. Ndijonge ukunika "umgangatho wehotele" ekucoceni.
4.76 · Izimvo eziyi-78
Indawo entle kufutshane nepaki enkulu
Izimvo eziyi-1 124
Kuphela ukuba kuyimfuneko
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2251
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Currajong